झापाका कोरोनाको आशंका गरिएका विरामीमा फ्लू र निमोनिया : डा. पाण्डे | Samabesi Khabar
झापाका कोरोनाको आशंका गरिएका विरामीमा फ्लू र निमोनिया : डा. पाण्डे
झापाबाट कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको आशंकामा काठमाडौं ल्याइएका विरामीमा फ्लू देखिएको ग्राण्डी अस्पतालले जनाएको छ । विराटनगरको नोबेल मेडिकल हस्पिटल पुगेका भद्रपुर निवासी एक पुरुषलाई प्रारम्भिक जाँचपछि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको आशंकामा काठमाडौं पठाएको थियो । कोरोनाको आशंकामा उनको थप उपचारका लागि ग्राण्डी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो ।
फ्लूका कारण निमोनिया समेत भएका ती विरामीको आइसीयूमा राखेर उपचार भइरहेको ग्राण्डीका बरिष्ठ चिकित्सक डा. चक्रराज पाण्डेले जानकारी दिए । उक्त विरामीको फ्लू लगायत अन्य संक्रमणको सम्पूर्ण जाँच गराएको छ भने साँझसम्ममा रिपोर्ट आइसक्ने उनले बताए ।
ग्राण्डी अस्पतालमा कोरोनासँग जुध्न विभिन्न सुरक्षा सर्तकता अपनाइएको उनले बताए । प्रत्येक विरामीको ज्वरो नाप्ने लगायतको प्रक्रिया पुरा गरिएको र शंका लागेका विरामीलाई बाहिरै आइसोलेशन लगायतका विधि अपनाइएको उनले बताए ।
झापाबाट ल्याइएको विरामीमा भने कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणभन्दा पनि मौसमी फ्लू भएर उनलाई निमोनिया भएकाले आइसियूमा राखिएको उनले सुनाए । ज्वरो आउने र रुघाखोकी लाग्ने बित्तिकै कोरना भाइरसको सङ्क्रमण भन्दै आत्तिन नहुने उनको सुझाव छ ।